Aretina haromotana Azo sorohana tsara
Areti-maso Katarakta no mahavoa ny 50 %-n’ny marary
Saika katarakta avokoa no mahavoa ny 50 %-n’ireo olona marary maso eto amintsika, indrindra ho an’ireo efa nahazoazo taona.
Vaksiny iadiana amin’ny aretina lefakozatra Hotanterahina manomboka ny 12 aogositra ny andiany faha-15
Na dia efa azon’i Madagasikara tamin’ny volana jona taona 2018 aza ny sata “Madagasikara, firenena afaka amin’ny aretina lefakozatra” dia mbola hitohy hatrany ny fanaovam-baksiny iadiana amin’ity aretina
Sehatry ny fahasalamana Araha-maso amin’ny fanodinkodinam-bola i Madagasikara
Mampalailay fonosana ny mpamatsy vola ny fisiana kolikoly tamin’ny sehatra vaksiny izay nampisaringotra tompon’andraikitra maro tamin’ny taon-dasa.
Olona maty tampoka Efa narary fo, hoy ny dokotera
Nitondra fanazavana mikasika ireo olona maty vokatry ny fihetseham-po ny dokotera Fidy Bariniaina, omaly. Nambarany fa olona efa narary fo ireny maty tampoka ireny amin’ny ankapobeny.
Gastrotraining Afrika andiany faha-4 Traikefa hisorohana ny aretin’ny taova fandevonan-kanina
Notanterahina tany amin’ny Hopital Americain tany Parisy tamin’ny 5 sy 6 Jolay lasa teo ny andiany faha-4 tamin’ny Gastrotraining Afrika.
Aretin’ny voa Ho maimaimpoana ny fanaovana “dialyse”
“Hojerena ny hanamorana ny fanaovana “dialyse” ho an’ireo marary voa. Ho maimaimpoana ny fanaovana azy noho ny fahatsapana ny fahasahiranan`ny rehetra “, hoy ny filoha Rajoelina.
Tobim-pahasalamana fototra (CSB) miisa 500 amin’ireo 2.660 misy eto amintsika no hahazo vata fampangatsiahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro, mba hitahirizana ny vaksiny.
Omaly no nanolorana izany tamin’ny fomba ofisialy, teny amin’ny Institut National de Santé Publique et Communautaire na INSPC Befelatanana, niaraka tamin’ny fampitaovana natolotr’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola hafa.
Haharitra 3 volana ny fanaovam-baksiny maimaimpoana ireo saka sy alika ho fiarovana amin’ny haromotana.
Efa nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny biraon’ny fiompiana ampandrinomby izany ary amin’ity andiany ity dia ny faritr’Analamanga sy Alaotra Mangoro no hahazo ny vaksiny. Ireo faritra ireo no nahitana trangana haromotana maro sy olona 15 maty tao anatin’ny taona iray. Azo sorohana tsara anefa izy io saingy tokony ho mailo sy hentitra ny rehetra amin’ny fanaraha-maso ny biby ao an-tokantrano. Hisy ihany koa moa ireo “Equipe Mobile” hizara ny vaksiny amina boriborintany 3 eto an-drenivohitra sy amin’ny kaomina manamorona ny faritra Alaotra Mangoro. Ankotr’izay dia hisy fanentanana sy fampahafantarana ireo mpiompy alika sy saka izay ataon’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono amin’ny loza ateraky ny haromotana. Tsiahivina fa aretina azo avy amin’ny kaikitr’alika na rangotra na lelaka eny amin’ny hoditra no hahazoana ny aretina ary mety hiteraka fahafatesana mihitsy. Ny vaksiny fanefitra atao amin’ny saka sy alika isan-taona ihany no azo hamongorana azy. Amin’ity taona ity dia vaksiny maherin’ny 9.000 no homena mamaimpoana ho an’ireo mpiompy alika sy saka rehetra. Hotsinjaraina amin’ny faritra roa ireo vaksiny ireo ka ny 22 jolay ka hatramin’ny 28 aogositra no eto Analamanga ary ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro ny 21 aogositra ka hatramin’ny 4 septambra.